Saldhigga Ciidanka Itoobiya Ee Magaalada Baardheere Oo la duqeeyay.
Tuesday July 25, 2017 - 10:29:35 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in duqeyn culus loo geystay saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin bartamaha magaalada Baardheere oo ay xoog ku heystaan ciidamada xabashida Itoobiya.
Ciidanka Itoobiya ayaa shaatiga AMISOM ku Qabsaday Baardheere
Wararka ka imaanaya magaalada Baardheere ayaa sheegaya in xalay fiidkii ay ciidamada Xarakada Al Shabaab madaafiicda Hoobiya ku garaaceen mid kamida saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada gumeysiga Itoobiya ka sameysteen gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in madaafiicda hoobiyaha ay ku hoobatay isku imaatinno ay ciidamada Itoobiya ku sugnaayeen.
illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay duqeymaha lagu weeraray xarunta ciidamada Itoobiya ee magaalada Baardheere, saraakiil katirsan maamulka DF-ka ee gobolka Gedo ayaa horay u sheegay in Itoobiyaanku ay si iskood ah u maamulaan magaalooyinka gobolka gaar ahaan Baardheere.